८० प्रतिशत मुटु रोगबाट बच्न जीवनशैली परिवर्तन र प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्नेः डा. कपुर
न्युज अफ नेपाल, काठमाडौं । नेपालमा १८ प्रतिशत मानिसहरूको मृत्यु मुटुको कारणले हुने गरेको छ । ८० प्रतिशत जीवनशैली परिवर्तन र प्रविधिको प्रयोग गरेर रोक्न सकिने गुरूग्राम भारतका मेदान्त अस्पतालका
‘मिल्क टि’ भन्दा ‘ब्ल्याक टि’ नै ठिक
एजेन्सी । विश्व भरी नै चियाका पारखीहरु भेटीन्छन् । यसमा पाईने एन्टिअक्सिडेन्टले शरीरमा स्फूर्ती एबं ईनर्जी भरीदिन्छ ।चिया स्वादको लागी मात्र नभई स्वास्थ्यको हिसावले पनि उचीत मानीन्छ ।मानीसहरु धेरै जसो
ग्यास्ट्रिकबाट बच्न केके कुरामा ध्यानदिनुपर्छ ? जानीराखाैं
न्युज अफ नेपाल, काठमाडौँ । अहिलेको समयमा ग्यास्ट्रिक नभएको नेपााली भेटाउन गाह्रो हुन्छ ।मानिसको अल्छीपनाले ग्यास्ट्रिकको सिकार बन्न पुगिन्छ । खाना र व्यायाममा ध्यान नदिँदा र बजारमा उपलब्ध विभिन्न तयारी
मस्तिष्कमा नसा फुटेर रगत जमेको कसरी थाहा पाउने ?
हाम्रो शरीरमा मुटुले रगत पम्प गरिरहेको हुन्छ । त्यस्तो रगत विभिन्न अंगमा पुर्याउने काम चाहिँ धमनीले गर्छन् । तर, धमनीको पर्खाल कहिलेकांही कमजोर हुनसक्छ । त्यसले गर्दा रगतको दबाब झेल्न
पछिल्लो समय विश्वभर मिर्गौलाको पत्थरी हुनेको संख्या व्यापक छ । मिर्गौलाको पत्थरी विभिन्न कारणले हुन्छ । हाम्रो गलत लाइफस्टाइल, गलत आहार तथा फोहोर खाना र पानी यसका कारण बन्न सक्छन्
मनिला । फिलिपिन्समा यस वर्षका प्रथम आठ महिनामा डेङ्गु रोगीको संख्या एक लाख ८८ हजार पुगेको स्वास्थ्य विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार डेङ्गुकै कारण ८०७ जनाको मृत्यु भएको छ
पुष्कर बुढाथोकी, भक्तपुर । दातृ निकाय र व्यक्ति व्यक्तिको सहयोगमा संचालन हुदै आएको भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा व्यापक अनियमितता भएको गुनासो बढेकोे भन्दै भक्तपुर नगरपालिकाले भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल व्यबस्थापन समिति खारेज
काठमाडौ । विश्वका विभिन्न मुलुकको चिकित्सा शिक्षा, शैक्षिक कर्जा र आवास व्यवस्थाबारे नेपालमा पहिलोपटक ‘मेडिकल एजुकेसन करियर एक्स्पो, २०१९’ हुने भएको छ । ‘वाइड रेन्ज कन्सल्टेन्सीले भदौ ४ र ५
भगवती तिमल्सिना, काठमाडौं क्यान्सरका बिरामीले शरीरभित्र यान्त्रिक गोटी पठाई गर्दैआएको ‘पेट स्क्यान’ नामको परीक्षण तीन महिना बन्द भएपछि गएको शनिबारबाट निजी क्षेत्रको कुण्दालिनी डाइग्नोस्टिक सेन्टर, वंशिधर मार्गमा शुरू भएको छ।
हेटौँडा । हेटौँडामा डेङ्गुले महामारीको रूप लिन थालेपछि नियन्त्रण अभियानमा आजबाट नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी सहभागी भएका छन् । हेटौँडाको पशुपति मन्दिर परिसरबाट ठूलो सङ्ख्यामा सर्वसाधरण, विभिन्न
अव्यवस्थित सडक निर्माण र खाल्टाखुल्टी नै डेंगुको दिगो स्रोत
के हो डेंगु डेंगु ज्वरो एडिस एजिप्टाई जातको पोथी लामखुट्टेको टोकाइबाट मानिसमा सर्ने सरुवा रोग हो। यो अरू लामखुट्टेभन्दा भिन्न रंगको हुन्छ र सजिलै चिन्न पनि सकिन्छ। यसको रङ सेतो
डोटी अस्पतालमा आयो डिजिटल एक्सरे मेसिन
विमल विष्ट, डोटी । जिल्ला अस्पताल डोटीमा डिजिटल एक्सरेमेसिन आएको छ । अस्पतालमा भएको सादा एक्सरे मेसिन पनि बिग्रीएको र बिरामीलाइ एक्सरे सेवा लिन कठिन भैरहेका बेला सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले
गंगालाल अस्पतालको प्रमुखमा डा.युवराज
काठमाडौँ । बाँसबारीस्थित गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा डा. युवराज लिम्बू नियुक्त गरिएकोछ । अन्य स्वास्थ्य क्षेत्रमा लामो समय पद खाली हुँदा सरकारले कार्यकारीबाट काम चलाउँदै आएको आलोचना खेप्दै
काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई डेङ्गु रोग नियन्त्रण गर्न आर्थिक सङ्कट देखा परेको छ । आव २०७५/७६ को हालसम्म तीन हजार ४२५ मा सो रोग देखा परिसकेको छ ।
स्वास्थ्य चौकीमा प्रसूति गृह नहुदाँ महिलालाई समस्या
यमलाल भुसाल, बुटवल । मोतिपुर स्वास्थ्य चौकीमा सुत्करी गराउनको लागी प्रसुति गृह बनाउन एक कार्यक्रममा वोल्ने सरोकारवाले माग गरेका छन । उनिहरुले ३ वटा वडाका जनताले स्वास्थ्य सेवा लिने स्वास्थ्य
सिटीस्क्यान मेसिन बिक्रीमा ठगी, १ पक्राउ
सुरुङ्गा । इलाका प्रहरी कार्यालय दमकले सिटीस्क्यान मेसिन बिक्री गर्दा ठगी गरेको आरोपमा एक व्यक्तिलाई फक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा विराटनगर घर भएका रेडियोलोजिष्ट डा सुनिलदेव रहेका छन् ।
अस्पतालको लापरवाही, परिसरभित्रै फोहोर जलाउँदै
सुरुङ्गा । झापाको दमकमा रहेको लाइफलाइन अस्पताल प्रालिले अस्पतालबाट निस्किएको फोहर मापदण्डविपरीत आफ्नै परिसरमा जलाउने गरेको पाइएको छ । अस्पतालबाट निस्किएको फोहर परिसरमै जलाउँदा भाइरलको समस्या देखापरेको भन्दै स्थानीयवासी आन्दोलित
मोरङमा सञ्चालित एम्बुलेन्समाथि प्रहरीको निगरानी
विराटनगर । मोरङमा सञ्चालनमा रहेका एम्बुलेन्समाथि प्रहरीले विशेष ढंगबाट निगरानी बढाउन थालेको छ । विशेष परिस्थितिमा चलाउनु पर्ने एम्बुलेन्समा चालकको लापरबाही बढेको पाइएपछि कडाई गर्न थालिएको मोरङ प्रहरीका प्रवक्ता डीएसपी
रेयुकाई आँखा अस्पताललाई उपकरण हस्तान्तरण
काभ्रे । रेयूकाई एईको मासुनागा आँखा अस्पताल बनेपालाई अष्ट्रेलियन दुतावासले विभिन्न उपकरणहरु उपलब्ध गराएको छ । अष्टे«लियन राजदुत पिटर वडले अस्पतालका अध्यक्ष मधु आचार्यलाई सामाग्री हस्तान्तरण गराएका हुन् । ‘३८
६२ जनामा डेङ्गु सङ्क्रमण
हेटौँडा । मकवानपुरमा ६२ जनामा डेङ्गुको सङ्क्रमण भेटिएको छ । सङ्क्रमितमध्ये ३० जना सरकारी तथा ३२ जना निजी क्लिनिकमा उपचार गराइरहेको छ । ती सबै सङ्क्रमित हेटौँडा उपमहानगरपालिकाका छन् ।